Budata Airbus A380 Air France FSX - Rikoooo
downloads 55 809
Model site Robert Versluys, panel site Pasquale Rinaldi, ụda site Cadmus Lee
Lee ndị ọhụrụ mụrụ site Air France, Airbus A380! A ezigbo emeso ụgbọala na-akpali akpali bụ na-ekwe nkwa, na-agụnye omenala ụda na a panel kpọmkwem 2D nlereanya. Ịdọ aka ná ntị ọ bụla virtual kokpiiti, mgbe amalite, nri pịa na ihuenyo na họrọ 2D kokpiiti echiche.
- On October 30, 2009, Air France-KLM natara ya nke mbụ ya Airbus A380
- On November 20, 2009, ụlọ ọrụ emewo ka ahụ nwata-nwayi ụgbọ elu nke A380 n'etiti Paris na New York na 538 njem na osisi.
Air France na-ewere nnyefe nke mbụ ya Airbus A380, ndị kasị ibu n'ụwa airliner, nke nwere ike na-ebu 538 njem n'elu 13,000 km. Atọ nke iri na abụọ ụgbọ elu na iji ga-anapụta Air France n'etiti now na mmiri 2010, na-anya sochiri a anọ. Malite on 23 November 2009, ndị Air France A380 ga-ejikwara na kwa ụbọchị flights n'etiti Paris - Charles de Gaulle na New York - JFK, ndị Paris-Johannesburg n'oge oyi 2009-2010.
Air France bụ ya mere mbụ European ụgbọelu iji rụọ ọrụ a Superjumbo, na nke mbụ ụgbọelu n'ụwa nile na-enye transatlantic flights n'etiti Europe na USA na a ugbo elu.
The A380 bụ karịsịa mma-ruru eru ka atụmatụ nke Air France, na ya size bụ ezigbo egwuregwu n'ihi na ụgbọelu dị ike ehiwe na Paris - Charles de Gaulle.
Ya anọ ala-nke na-art GP 7200 engines, ya aerodynamic udi na ya fuselage tụnyere ndị ọhụrụ teknụzụ-eme ka ndị A380 kasị environmentally-enyi na enyi ugbo elu nke ya na udi otu.
«Na 1996, Air France dabeere ya mkpebi inweta ndị A380 on ebumnobi ibiere nke gosipụtara na arụmọrụ nke a ụgbọ elu e kwesịrị ruru eru ka Company chọrọ», kwuru, Jean-Cyril Spinetta, onyeisi oche nke Board Nduzi nke nke Air France-KLM .
The A380 anya isi Ẹkot ike iji na nke a Boeing 777-200 na ihe Airbus A340-300 jikọtara, mgbe àjà a 20% gụnyere ya ná operating-akwụ ụgwọ.
«Onye ọ bụla A380 ga-eme ka Air France ịzọpụta 12 ka 15 nde euro otu afọ, nke na, n'oge onodi aku ihu igwe, na-enye Company na-esi n'aka iji nagide nsogbu. Air France ga-mere-enwe ike na-enye ndị ahịa ka ukwuu nkasi obi, mgbe idebe ya na-akwụ ụgwọ n'okpuru akara. Ọzọkwa, arụmọrụ nke A380 dị na akara na ihe Company si gburugburu ebe obibi nkwa ime », kwukwara Pierre-Henri Gourgeon, CEO nke Air France.
Air France si A380 awade njem atọ ọmụmụ: La Premiere-mbụ - 9 oche na isi oche - Affaires-Business - 80 oche na elu oche - na Voyageur-Economy 449 oche gbasara abụọ redio. Na nke ọ bụla n'ụzọ dị ịrịba ama jụụ ụlọ, Air France kere chiri anya akụjụ ambience, ekele kemeghi ọkụ ruru eru na-dị iche iche nkebi nke ụgbọ elu. Ma ọ nzukọ isi ma ọ bụ a ezumike ebe, onye ọ bụla ụlọ e ruo eruo na ihe niile njem kwesịrị ime ka ha gbaa ọsọ ahụmahụ a n'ezie na-atọ ụtọ otu. 22 ụgbọ elu na-eje ozi bụ ndị nọ n'ụgbọ-ejere 538 ahịa.
Dị ka n'oge dị 1996, Air France wee akụkụ ke-arụ ọrụ dị iche iche gụnyere Airbus na isi igba egbe ebu ihe ndị A380, ka chepụta ụgbọelu nke nwere ike izute ahịa na-atụ anya, na kwadebeere maka ọbịbịa ya ebe ọ bụ na 2003. Air France nakwa na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ ọchịchị imeghari n'ala ụlọ ọrụ na-ọhụrụ a ugbo elu, zụrụ ma ndi oru ugbo na ala mkpara na nyekwara ke kwesịrị ekwesị ramp akụrụngwa.
Onye edemede: Ihe atụ nke Robert Versluys, panel site Pasquale Rinaldi, na-ada site na Cadmus Lee
Airbus A300 Mega ngwugwu Mega FSX & P3D